Global Voices teny Malagasy » Nahilik’i Aostralia ary Nomelohina Higadra ao Indonesia, Manohitra ny Fiainana Tsy Antany Tsy Amparafara Ny Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Febroary 2018 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra Nicole Valentini Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afganistana, Aostralia, Indonezia, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Lalàna, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Vonjy Voina, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
13 ireo foibem-pamonjàna fifindra-monina any Indonezia, izay mahazaka gadra 1300. Matetika maloto, hipoka olona sy mora tratran'ny tondra-drano mandritra ny vanim-potoanan'ny orana ireo foibem-pamonjana ireo . Hatramin'ny 17 janoary 2018, manohitra ireo fepetra ireo ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny tobim-pamonjana ao Balikpapan.
Novatsian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Fifindra-monina (FIF) ara-bola ny fanavaozana sy ny fanitarana ny toeram-pamonjana, mampiasa famatsiam-bola avy amin'ireo sampan-draharaham-panjakana Aostraliana maro. Nanameloka ity “Vahaolana Indoneziana ” ity ireo fikambanana tsy miankina Aostraliana, milaza fa mandoa vola “an-jatony tapitrisa dolara ho an'i Jakarta ny governemantany mba hanagadrana sy hametrahana ireo mpangataka fialokalofana. Mamela ireo mpifindra monina mba hotazonina hatramin'ny 10 taona tsy misy fandinihana ara-pitsarana ny lalàna Indoneziana .
Na dia tsy fikambanana mpanao asa soa aza ny FIF ary tsy manam-pahefana hanampy ireo mpitady fialokalofana sy mpitsoa-ponenana, miantso ireo mpitady fialokalofana sy mpitsoa-ponenana mba ho ampiany ireo manampahefana Indoneziana misahana ny mpifindra monina na ny UNHCR. Any Indonezia, nanampy tokoa an'i Aostralia tamin'ny fitantanana ny fanarahamaso ny sisintaniny ny FIF, saingy lavitry ny tranga tokana izany izay toa mhanohitra ny lafiny maro amin'ny asa ataon’ ny fikambanana. Notsikerain’ ireo mpikaroka ny FIF noho ny fandraisany anjara amin'ny asa soa sy ny tetikasa mampiady hevitra any amin'ny faritra samihafa manerana ‘izao tontolo izao. Any Libya, firenena iray mbola eo am-piarenana noho ny korontana taorian'ny fidirana an-tsehatry ny tafika tarihin'ny OTAN tamin'ny taona 2011 , nahazo folo an-tapitrisa dolara ny FIF mba hanohanana rafitra iray natao hanakanana ny olona tsy hiala ho any Eoropa.
Tahaka ireo olona ao amin'ny fonjan'ny fifindramonina ao amin'ny nosy Nauru sy Manus,  ao Aostralia, mijanona ho voakendaroroka ireo mponin'i Balikpapan – voakendaroroky ny fahatsapana fanoherana mpifindra monina sady voakendaroroky ny mpanao politika maniry ny hampiasa izany fahatsapana izany mba hahazoana vato.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/20/114365/
 13 ireo foibem-pamonjàna fifindra-monina : http://www.insideindonesia.org/life-and-death-in-immigration-detention-2
 ireo foibem-pamonjana ireo: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0613webwcover.pdf
 Vahaolana Indoneziana: https://www.globaldetentionproject.org/countries/asia-pacific/indonesia
 lalàna Indoneziana: https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/11/22/indonesia-refugees-abandoned-by-australia-in-squalid-detention-centres
 asa ataon’: https://www.iom.int/mission
 fidirana an-tsehatry ny tafika tarihin'ny OTAN tamin'ny taona 2011: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya
 Nauru sy Manus,: http://www.refugeeaction.org.au/?page_id=4528